राजनीति गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले २४ वर्षमा यति धेरै सम्पत्ति कसरी कमाए ? – JanaSanchar.com
राजनीति गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले २४ वर्षमा यति धेरै सम्पत्ति कसरी कमाए ?
संबाददाता : जनसंचार डेस्क	प्रकाशित मिति: (२०७५ जेष्ठ १९, शनिबार) ०५:४४
सार्वजनिक भएको ओलीको व्यक्तिचित्र अनुसार राजनीतिबाहेक उनको अन्य आयस्रोत छैन । उनकी पत्नी भने बैंकमा जागिरे थिइन् । सार्वजनिक व्यक्तिचित्र अनुसार २००८ को फागुनमा तेह्रथुमको आठराईमा जन्मिएका उनको परिवारको आर्थिक अवस्था न्यून नै हो । उनी २०२५ सालबाट राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् ।
(२०७५ जेष्ठ १९, शनिबार) ०५:४४ मा प्रकाशित